Qarax gaari oo saaka ka dhacay degmada Wadajir – STAR FM SOMALIA
Qarax ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa saaka ka dhacay degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxan uu ka dhacay wadada ka timaada deegaanka Jaziira, iyadoo gaariga uu ku qarxay meel u dhow bar koontarool.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ciidamada ka tirsan dowladda ay rasaaseeyeen gaarigan, kaddib markii uu ku soo dhowaaday koontaroolka.
Gaariga ayaa la sheegay inuu ahaa gaadiidka BL-ka ama Hoomey, waxaana waday qof naftii hure ah, wararka qaar ayaa sheegaya in bartilmaameedka uu ahaa Warshada Nacnaca oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka, balse inta aanu gaarin ayuu qarxay.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Wadajir ayaa sheegaya in gaarigan uu qarxay, ka hor inta aanu gaarin halkii lala rabay, waxaana ku dhaawacmay labo qof.